Paulinho oo kategay Barcelona iyo kooxda ku biirey? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Paulinho oo kategay Barcelona iyo kooxda ku biirey?
(09-07-2018) Cayaaryahanka xulka dalka Braziil ee Paulinho ayaa lacadeeyey in uu Macasalaameeyey kooxda dalka Spain ee Barcelona isla Markaana uu dib ugu laabtay Naadiga dalka shiinaha ee Guangzhou Evergrande.
Naadiga Horyaalka shiinaha ee Guangzhou Evergrande ayaa Axadii si rasmi ah u shaacisay in Cayaaryahan Paulinho uu dib ugu soo laabtay kooxda kadib markii uu ka soo tegay Barcelona oo uu u dheelayey xili Cayaareedkii lasoo dhaafay.
Heshiiska uu Paulinho dib ugu laabanayo kooxda Guangzhou Evergrande ayaa ku kacaya sida lasheegay aduun lacageed gaaraya 50 million euros.Waxaana uu saxiixi doonaa heshiis 4 Sano ah oo uu Naadigaas ugu Cayaari doono.
Paulinho oo Barcelona u Saftay 30 kulan Xili Cayaareedkii lasoo dhaafay ayaa dhaliyey 9 Gool waxaana sababta uu uga tegay Naadiga dalka Spain lagu sheegay in uusan haysan baasaboorka Midowga yurub iyo in uu booska u baneeyo Arthur oo ah Cayaaryahan ay isku wadan yihiin oo dhawaan ku soo biirey Barcelona.